SQL vs NoSQL - Kuwana iyo DBMS Yakakodzera yeProjekiti Yako - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Dhata Sayenzi, Database, NoSQL, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Kana zvasvika kune Database tekinoroji zvikamu zviviri zvikuru ndezvi - SQL neNoSQL kana, dhatabhesi rehukama uye dhatabhesi risiri rehukama. Vanogona kusiyaniswa maererano nechimiro chinoshandiswa, rudzi rwe data, uye nzira yekuchengetedza. Relational dhatabhesi rinoshandiswa paruzivo rwakarongeka senge marekodhi echikoro nepo Non-relational dhatabhesi anotungamirwa negwaro uye akagoverwa semafaira mafolda.
Mazwi eSQL uye NoSQL anoratidza kana iyo Database inonyorwa chete mumutauro wakarongeka wemibvunzo (SQL) kana kwete. Mune ino blog, tichakurukura zvakadzama zvinoreva SQL neNoSQL dhatabhesi, dzakasiyana sei uye ndeipi inofanirwa kusarudzwa zvichibva pane imwe neimwe nyaya.
Read More: Wepamusoro 5 Vhura Sosi Big Data Zvishandiso
Isu tinofukidza yakawanda yehunyanzvi misoro mune zviwanikwa zvedu. Inzwa wakasununguka kutarisa raibhurari yedu yee-eBooks uye tora zvaunotora.
Chii chinonzi SQL uye Rukama Databhesi?
A hukama Database inzira yakarongeka yekuchengeta data nenzira yematafura kureva mitsetse nemakoramu. Hukama Database inonziwo SQL Database sezvo yakanyorwa uchishandisa Structured Query Mutauro (SQL). Mitsara inomiririra zvinyorwa ukuwo makoramu achishandiswa kuronga kukosha. Hukama huri pakati pemitsara nemakoramu iyi hunonzi schema. Muhukama Database, tsananguro ye schema inoshanda sehwaro hwekuwedzera data.
Kune SQL (kana yehukama) Database kuti ishande iyo data inoda kurongeka zvine hungwaru, zvichitungamira mukuoma asi kurongeka kuri nani. SQL databases yakakurumbira pakati Developers sezvavanokwana zvoga mune zvakawanda Software masitaki, anosanganisira LAMP uye Ruby-based stacks. Aya dhatabhesi ari nyore kunzwisisa uye nekudaro anotsigirwa zvakanyanya.
SQL Dhatabhesi Mienzaniso:
MySQL - inonyanya kufarirwa yakavhurika-sosi SQL Database iyo inowanzosanganiswa neApache uye PHP. Inoshanda zvakanaka kumasaiti eCMS uye mablog.
pangataura - iyo C ++ yakavakirwa chinhu-zvine hukama DBMS. Inobhadharwa asi inova nechokwadi chikuru mabatiro evatengi uye kuvimbika.
IBM DB2 - IBM chigadzirwa chakakodzera yakakura data analytics.
Sybase- humwe hukama Database kumabhizimusi aive ekutanga Enterprise-level DBMS yeLinux.
MS SQL Server-imba Enterprise level RDBMS yakagadzirwa ne Microsoft. Inogona kutsigira zvese SQL uye NoSQL Database zvivakwa.
MariaDB-Iyo yakawedzeredzwa, inodonhedza-mukati vhezheni yeMySQL.
PostgreSQL- hukama-chinhu, Enterprise-level DBMS. Inoshandisa mitauro yemaitiro sePerl nePython, pamwe neSQL-level kodhi.
Chii chinonzi NoSQL uye Isiri-Rukama Dhatabhesi?
Kunyangwe dhatabhesi rehukama richishanda nemazvo kune yakarongeka data, kuomarara kwavo kunogadzira matambudziko pakubata nedata isina kurongeka. Apa ndipo panowanikwa dhatabhesi dzisiri dzehukama, dzinouya kuzonunura, nekupa kuchinjika kukuru kupfuura vamwe vavo vechinyakare. Kuchengeta, kubata uye kuongorora iyi data isina kurongeka isu tinoshandisa schema-shoma imwe nzira inonzi NoSQL (Kwete SQL chete) Database.
Seimwe nzira kune matafura, NoSQL dhatabhesi inoshandisa nzira inotungamirwa negwaro Database management. Izvi zvinoreva kuti data isina kurongeka (senge zvinyorwa, mifananidzo, evanhu vezvenhau data, mavhidhiyo nezvimwe mukati meblog post) inogona kuchengetwa mugwaro rimwe chete. Aya mafaera achange ari nyore kuwana asi haafanire kuiswa muzvikamu senge kana paine hukama. Database. Iyo inoshanduka-shanduka, asi yakanyanya kusimba zviwanikwa maererano nekugadzirisa uye kuchengetedza zvinodiwa. Saka kazhinji inoshandiswa kuburikidza gore kadambari.
NoSQL Dhatabhesi Mhando (ine Mienzaniso):
Kiyi-kukosha modhi - iri nyore mhinduro yeNoSQL, inochengeta dhata mune schema-shoma fashoni uchishandisa yakamisikidzwa makiyi nemitengo. Mienzaniso: Apache Cassandra, Microsoft Azure, LevelDB, uye Riak.
Column chitoro - inoshandisa inverted tafura nzira iyo matafura edata anochengetwa semakoramu pane mitsara. Chikamu icho chakabuda mumakoramu chinobvumira kuita zviri nani scalability uye kuita. Mienzaniso: HuruTable, HBase, HyperTable.
Document Database - gwaro rega rega rinopihwa yakasarudzika kiyi yekutora data rayo. Iwe unogona kunzwisisa izvi sekiyi-kukosha kukosha pamwe nekuwedzera kuomarara. Iyo mhinduro hombe yekugadzirisa gwaro iro rakarongeka asi richida nzira yeNoSQL. Mienzaniso: CouchDB, MongoDB.
Girafu Database - yakashandiswa kumiririra data rakabatana segirafu. Iyi nzira inobvumidza yakakwira chikamu chekuoma. Mienzaniso: Neo4J, Polyglot
Kuziva Yakanyanya Kukodzera - NoSQL vs SQL:
Ngatifananisei SQL neNoSQL dhatabhesi padivi nedivi mune akasiyana mamiriro kuti akubatsire iwe kuti uone yakanakira kukodzera kune ako zvaunoda:
SQL dhatabhesi inotsiva NoSQL kana zvasvika pakubata query yakasimba dhatabhesi dhatabhesi. Mibvunzo mukati mavo ine simba muSQL mukuenzanisa neNoSQL. Padanho repamusoro, NoSQL haina yakajairwa nzvimbo yekuita mibvunzo yakaoma.
Kuchengetwa Kwe data:
Kana zvasvika pakubata hierarchical data NoSQL Database inoratidza kuve yakanyatsokwana sezvo ichitevera kiyi-value mbiri nzira yekuchengeta data yakafanana neJSON data. Panyaya yekubata big data, NoSQL Database ndiyo nzira yekuenda-kune nekuda kwekusiyana kwakanyanya uye huwandu.
SQL dhatabhesi dzinotwasanuka. Zvinoreva kuti kuwedzera mutoro kunogona kutarisirwa nekuwedzera iyo CPU, RAM, SSD, nezvimwe, pane imwechete server. Pane zvinopesana, NoSQL dhatabhesi inogona kuyerwa yakatwasuka. Iwe unogona kuwedzera huwandu hweseva kuti ubate kuwedzera kwe traffic.
SQL dhatabhesi ndiyo mhinduro yakakodzera yezvinorema kutengeserana zvikumbiro. Zvehukama dhatabhesi dzakadzikama uye dzinoona data kutendeka Ipo NoSQL ichipa chiyero chekushandisirana chikumbiro, iri shoma uye isina kugadzikana ichiita kuti isakwanise kune akaomarara mashandisirwo ekushandisa.
Sezvo SQL iri nyore kunzwisiswa nevanenge vese Software Developers, zviri nyore kuchengetedza rutsigiro rwakakura nemutengo wakakwana. Kunyangwe vatengesi vakuru vane zvikwata zvavo zvekutsigira vatengi. Kana iri NoSQL Database, ungangoda kubvunza nyanzvi (izvo zvinodhura zvakanyanya) kana kuvimba nerutsigiro rwenharaunda.
Sezvo iwe waona sarudzo pakati peSQL neNoSQL dhatabhesi inoenderana zvakanyanya nezvinodiwa nemunhu. Dzese DBMS dzine zvadzo zvayakanakira nezvayakaipira uye iwe unozoda hunyanzvi hunyanzvi hwekuita nezvinodiwa nevatengi. At NewGenApps, takagadzira hunyanzvi hwakadzama mukubata kwakasiyana-siyana Software zvinodiwa (zvose famba uye dandemutande). Kana iwe uine chirongwa chitsva kana uchida rubatsiro mukutumira kana kutama kwe data rako riripo, inzwa wakasununguka kuti utaure.